सनले पूरा गरे सैनिक तालिम- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
सनले पूरा गरे सैनिक तालिम
सोल — टोटनहमका स्ट्राइकर सन हेवङ–मिनले शुक्रबार दक्षिण कोरियाको अनिवार्य तीन साताको सैनिक तालिम पूरा गरेका छन् । उनलाई उत्कृष्ट पाँचमा छनोट गर्दै सेनामा भर्ना पनि गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियाली सेनाको समुद्री एकाइले सनको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा उनले एम १६ एसल्ट राइफल बोकिरहेका छन् । सेनाको फेसबुक पेजमा सनले स्यालुट गरिरहेको तस्बिर पनि हालिएको छ ।
दक्षिण कोरियामा शारीरिक रूपमा स्वस्थ सबै पुरुषले दुई वर्षको सैनिक तालिम अनिवार्य लिर्नै पर्छ । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने एसियाली खेलाडी सनले सन् २०१८ मा इन्डोनेसियामा भएको एसियाली खेलकुदमा दक्षिण कोरियाका लागि स्वर्ण जितेका थिए ।
उनी एसियाली फुटबल संघका वर्तमान वर्षखेलाडीसमेत हुन् । जापानलाई अतिरिक्त समयमा २–१ ले हराएर फाइनलमा विजेता रहेपछि स्पर्स स्टार मैदानमै रोएका थिए ।
त्यस जितका कारण उनले तीन साता मात्र सैनिक अभ्यास गरे पनि पर्याप्त भएको हो । उनले थप पाँच सय घण्टा सामुदायिक सेवा भने गर्नुपर्नेछ । अप्रिलमा सन जेजुमा भएको सेनाको आधारभूत तालिममा सन सहभागी भएका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ १३:१४
कोसी अस्पतालबाट थप ८ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
निको हुनेको संख्या ३० पुग्यो
वैशाख २६, २०७७ देवनारायण साह
विराटनगर — विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा उपचाररत ८ जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । शुक्रबार डिस्चार्ज हुनेहरुमा भारतका एक जना युवा, विराटनगरका २ जना पुरुष र उदयपुरकी एक महिला र चार पुरुष रहेका छन् ।
डिस्चार्ज भएकाहरुले उपचार केन्द्रमा आफूहरुलाई चिकित्सकहरुले नियमित हेरचाह गरेकोले आत्मबल मजबुत भएर कोरोना निको भएको बताए । उनीहरुले उपचार केन्द्रमा कोरोना रोगको कुनै किसिमको औषधि खानु नपरेको बताए । उनीहरुले भुल्केबाट ल्याउने क्रममा प्रहरीले एकैछिनमा गाईघाटबाट एउटा जाँच गराएर ल्याइदिने भन्दै ढाँटेर ल्याएको गुनासो पोखे । आफूहरुले शरीरमा लगाएको एउटा लुगाले मात्रै १८ दिन बिताउनु परेको उनीहरुले गुनासो पोखे । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि घर जान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर उनीहरुमध्ये एक जनालाई भुल्के र अन्य ७ जनालाई विराटनगर १५ रानीस्थित ‘रानी मरकज’ को क्वारेन्टाइनमा पठाइएको कोसी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगिता मिश्रले बताइन् । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले एक जनालाई स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा त्रियुगा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा वा उनको घरमै राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताए । डिस्चार्ज भएका सबैलाई मन्त्री घिमिरेले बिदाई गरेका थिए ।
उनीहरुको सोमबारदेखि लगातार गरिएको स्वाब परीक्षण रिपोर्टमा बिहीबार कोरोना भाइरस नेगेटिभ देखिएको थियो । भुल्केका १५ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये ८ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र ७ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको घिमिरेले बताए । उनीहरुमध्ये वैशाख ८ गते १० जना, ९ गते ४ जना र १० गते १ गरी १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचार केन्द्रमा ल्याइएको थियो ।
कोसी अस्पतालका चिकित्सक डा. दीपक सिग्देलले उपचार केन्द्रमा आएदेखि हालसम्म कसैलाई पनि कुनै किसिमको उपचार नगरिएको बताए । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका सबै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने, ‘उपचार केन्द्रमा बसेका ३१ जनामै कुनै किसिमको कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको छैन ।’
यसअघि प्रदेश १ मा सबभन्दा पहिले संक्रमण पुष्टि भएका १३ जनामध्ये ६ जना स्वस्थ भएर बुधबार डिस्चार्ज भएका थिए । उनीहरुलाई विराटनगरस्थित रानी मरकजमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । लगातार ३ पटकसम्म स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेको संख्या १३ पुगेको छ । रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेहरुको ५ दिनपछि पुन: स्वाब परीक्षण गरिने सिग्देलको भनाइ छ ।
उदयपुरको भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा बसेका १२ भारतीय र ४ विराटनगरबासीमध्ये १ विराटनगरबासी सहित १२ जनामा वैशाख ५ गते कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यही दिन उनीहरुलाई विराटनगरस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा ल्याएर राखिएको थियो । त्यसपछि भुल्केका थप १६ जना गरी कूल २८ जना संक्रमित भई उपचार केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । जसमध्ये १४ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् । अब भोजपुरको हतुवागढीको १ र झापाको बाह्रदशी र दमकको २ र भुल्केका १४ जना गरी १७ जना केन्द्रमा उपचाररत छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये निको हुनेको संख्या ३० पुगेको छ । ७१ जना संक्रमितको भने विभिन्‍न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ १३:११